Kwenzekani xa ndiza kubeleka? – Messages for Mothers
Kwenzekani xa ndiza kubeleka?
Ooomama abangathi kanti bane-COVID-19 okanye banayo, bangabeleka ngesiqhelo yaye akukho mfuneko yohlobo oluthile lokubeleka ezifana notyando [caesarean section]. Inkathalo yesikhumba esikhumbeni kunye nokuncancisa kufuneka iqale xa kubelekwa.
Bonke oomama abafika kwiziko loubeleka baza kuhlolelwa iimpawu ze-COVID-19.
Ukuba ingaba kuthe kanti unayo okanye unayo nyani i-COVID-19, uza kujongwa endaweni ebucala yaye amagosa ezempilo aza kunxiba iimpahla zawo zokuwakhusela. Uza kucelwa ukuba unxibe ilaphu lokogquma impumlo nomlomo ukuze unqande usuleleko lunganabi ukuya kwezinye izigulana okanye amanye amagosa ezempilo.
Ukuba une- COVID-19, uza kujongwa kwindawo eqhelekileyo yokubeleka nezinye izigulana.
Nangona abahlobo ngexesha lokubeleka bexhasa oomama ababelekayo, ezinye iindawo zingangabavumeli ukuba babenawe ngeli xesha likabhubhani we-COVID19. Oku kukunqanda intsholongwane ukuba inganabi ukusuka ebantwini ukuya kwezinye izigulana, iintsana ezigqiba kuzalwa okanye amagosa ezempilo. Kuza kufuneka ubuze kwiziko lakho ukuba ithini inkqubo yabo. Ukuba unakho, zama ukuxhumana nomntu okuxhasayo ngomnxeba kangangoko unakho, lo gama ubeleka.
← Kufuneka ndenzeni ukuba andiziva kakuhle lo gama ndikhulelwe? → Yintoni eqhelekileyo xa ukhulelwe– yaye kufuneka ndiye nini ekliniki?